News – Page 31 – Hamrofm
चितवन हात्ती महोत्सव २०७३ को तयारी तीव्र
December 18, 2016	Local, News 0
पर्यटकीय नगरी सौराहामा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आयोजना हुने चितवन हात्ती महोत्सव २०७३ को तयारी तीव्र पारिएको छ । १३ औं संस्करणको महोत्सव आगामी पुस ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म चल्ने छ । आयोजक क्षेत्रिय होटल संघ सौराहाका अनुसार यसपटक हात्ती दौड प्रतियोगिता महोत्सवबाट हटाइएको छ । अजंगको ज्यान …
कालिका एफ.एम.लाई हराउँदै हाम्रो एफ.एम. अन्तर मिडिया फुटसल प्रतियोगिताको सेमि फाइनलमा प्रवेश
August 13, 2016	Local, News, sports 0
श्रावण २९– लक्की मिडिया हाउसको आयोजनामा भएको अन्तर मिडिया फुटसल प्रतियोगिताको आज शनिवार भएको खेलमा विजयी हुदै हाम्रो एफ.एम.सेमि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । कालिका एफ.एम.लाई १ का बिरुद्ध ३ गोलले पराजित गर्दै हाम्रो एफ.एम. सेमि फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । कालिका एफ.एम.ले गोल गरेर सुरु गरेको पहिलो हाफमा २–१ …